Antenimieram-pirenena: mitaky adihevitra sy mangaraharaha momba ny tetibola ny Rohy | NewsMada
Antenimieram-pirenena: mitaky adihevitra sy mangaraharaha momba ny tetibola ny Rohy
Mitaky ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2020 ny firaisamonim-pirenena Rohy, hisian’ny mangarahara sy fifanakolazan-kevitra mialoha ny handaniana izany eo anivon’ny Antenimiera. Naneho ny heviny, omaly tao Ambatonakanga, ny Rohy (Rindran’ny olom-pirenena hiarovana ny fiaraha-monina).
« Nangataka io volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2020 io izahay tamin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, amin’ireo tompon’andraikitra samihafa, manomboka amin’ny minisitra sy ny sekretera jeneraly, saingy tsy mahazo valiny izahay hatramin’izao », hoy ny ao amin’ny firaisamonim-pirenena Rohy.
« Mila adihevitra izany volavolan-dalàna izany, tsy handraisana fanapahan-kevitra maimaika. Tsy tokony hisy, noho izany, ny fandaniana azy raha tsy mandalo fifanakalozan-kevitra eo anivon’ny olom-pirenena. Tamberin’andraikitra takina amin’ny fanjakana izany ho fanajana ny mangarahara momba ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2020 », raha ny fanamarihan’ny Rohy.
Zava-dehibe tokony hifanakalozan-kevitra ny tetibolan’ny fitondram-panjakana, mahakasika ireo sehatra samihafa, fotodrafitrasa, sosialim-bahoaka, sns. Tsy raharahan’ny Antenimiera irery fa an’ny rehetra ny mandinika ny volavolan-dalàna momba ny tetibola. « Volam-bahoaka io ka zon’ny olom-pirenena ny mahalala izany. Tsy hanakiana be fahatany fotsiny izahay fa hijery izay ho tombontsoan’ny rehetra », hoy ny ao amin’ny Rohy. Miandry ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena.
Eny anivon’ny Antenimieram-pirenena, saingy…
Efa tonga eny anivon’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna, saingy tsikaritra fa toa tsy miasa mahakasika izany ny mpikambana ao amin’ny vaomieran’ny vola, fa manao fampielezan-kevitra izao. « Na koa ireo ao amin’ny Antenimiera tsy te hizara izany », araka ny nambaran’ny Rohy ihany. Amin’ny 28 novambra ho avy izao anefa tokony hoentin’ny vaomieran’ny vola amin’ny fivoriana azon’ny besinimaro hatrehina izany.
Notsiahivin’ity firaisamonim-pirenena ity ny fanajana ny fitsipiky ny fangaraharahana sy ny tamberin’andraikitra, nataon’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, ny taona 2017. Niainga avy amin’izany no nahafahan’ny firaisamonim-pirenena nanao famakafakana ny vokany teo amin’ny fiainan’ny mponina. Tokony ho hita ao amin’ny tranokalan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola ankehitriny io volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2020 io izao.